युगसम्बाद साप्ताहिक - मुलुकलाई सही मार्गमा ल्याउन आन्दोलन - हरिकृष्ण कार्की, अध्यक्ष नेपाल बार
Tuesday, 01.21.2020, 12:26am (GMT+5.5) Home Contact
मुलुकलाई सही मार्गमा ल्याउन आन्दोलन - हरिकृष्ण कार्की, अध्यक्ष नेपाल बार
Tuesday, 05.28.2013, 08:08am (GMT+5.5)
० नेपाल बार एसोसिएशन लगायतका संस्थाहरू अहिले पनि लोकतन्त्र–गणतन्त्रको रक्षा गरौं भन्दै सडकमा उत्रिएको छ । यस्तो अवस्था किन आयो होला ?
मुलुकको राजनीति जसरी गलत बाटोबाट अगाडि जाँदैछ यो स्थितिलाई सुधार गरेर जानुहोस् भनेर हामीले नेताहरूलाई बारम्बार भन्दै आयौं । वास्तवमा अहिले नेपाल बार एसेसिएशन मात्र नभएर यस्तै संस्थाहरूको सञ्जाल (पापड)मा आबद्ध र नागरिक समाजका व्यक्तिहरू समेत सामेल भएर विरोध नै गर्नुपर्ने, विरोधका कार्यक्रम नै लिएर अघि बढ्नुपर्ने खालको अवस्था उत्पन्न भयो र नागरिकलाई पनि सचेत गराउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने, आन्दोलनमा सहभागी गराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।
अब नागरिक सडकमा नउत्रेसम्म लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सकिन्न भन्ने अवस्था विकसित भएको हाम्रो निष्कर्ष रह्यो र त्यही निष्कर्षका आधारमा शुक्रबारबाट विरोध प्रदर्शन सुरु गरेका हौं । सुरुमा हामीले रत्नपार्कस्थित शान्ति वाटिकाबाट वसन्तपुरसम्म विरोध प्रदर्शन गरेर सभाको आयोजना ग¥यौं । यो हाम्रा भनाइहरूको सुनुवाइका लागि दिइएको दवाव मात्र हो । १५ गतेसम्म पनि हाम्रा मागहरूको सुनुवाई भएन भने हामी सरकारले मनाउने गणतन्त्र दिवस वहिष्कार गरेर नागरिकस्तरमा गणतन्त्र दिवस मनाउँछौं ।
० आन्दोलनमै गरेर मात्र मुलुकको संकट समाधान हुन्छ र भन्या ?
वास्तवमा जुन असंवैधानिक ढंगले मुलुक चलिरहेको छ यसबाट मुलुकलाई सही मार्गमा ल्याउनका लागि अब हामी आन्दोलनमै जानुपर्ने भएकाले विरोधका कार्यक्रमको सुरुवात गरेका हौं ।
० हैन, तपाईंहरूको माग पनि अचम्मकै छ हैन ? राजनीतिक दलहरूले गरेका मुलुकमा अनेक किसिमका अनैतिक कामहरूलाई छाडेर तपाईंहरू अख्तियार प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति नै गणतन्त्रका लागि खतराको सूचक हो भन्ने शैलीमा जानुभयो । यो त्यति जायज मुद्दा हो र भन्या ? यति काम भए दलहरू चोखो हुन्छन् ?
हैन, राजनीतिक दलहरूले मुलुकमा धेरै काम गर्न बाँकी छ । कार्कीको नियुक्ति एउटा खराब सुरुवात मात्र हो भन्ने हामीलाई लागेको छ । सरकारको जुन दिन निर्माण हुन लागेको थियो त्यतिबेला नै हामीले भनेका थियौं कि अब मुलुकमा प्रतिगमन सुरु भयो र यसले मुलुकलाई प्रतिगमनतिर उन्मुख गराउँछ भनेर । मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले नै मुलुकलाई प्रतिगमनतिर धकेले । चार राजनीतिक दलको संयन्त्रको नाममा ती पार्टीका केही नेताहरूमा आफ्नो पार्टीभित्रका निर्णयका बिरुद्ध जाने प्रवृत्ति र संस्कार देखियो । यसले झनै लोकतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न ग¥यो भन्ने मान्यता नै स्थापित हुँदै आइरहेको छ ।
हिजोका प्रतिगमनकारीहरूलाई त्यत्रो पवित्र ठाउँमा लगेर राख्ने जुन कार्य गरियो, त्यसले प्रतिगमनलाई अझ मलजल गर्ने काम गरेको छ भन्ने कुरा प्रष्टसंग देखिएको छ । राजनीतिक दलहरूले गर्नुपर्ने भनेको निर्वाचनको सुनिश्चितताका कामहरू हुन् । त्यो निर्वाचनको सुनिश्चितता मात्र होइन त्यसलाई स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बनाउने, मर्यादित र भयरहित बनाएर सबै नेपालीले सहभागी हुने वातावरण सिर्जना गर्ने काम राजनीतिक दलहरूको हो । राजनीतिक दलहरू त्यस दिशातिर अहिले पनि उन्मुख भैरहेको अवस्था छैन ।
० तपाईंहरू विरोध गरिरहने तर दलहरूले वेवास्ता गर्दै आएका छन् । खिलराज रेग्मीलाई सरकार प्रमुख बनाउने बेलामा पनि यहाँहरूले निकै चर्को विरोध गर्नुभो तर विरोधको कुनै अर्थ भएन । अख्तियारमा पनि यस्तै भयो । यसले गर्दा त तपाईहरूले विरोध गर्दै रहने र दलका नेताहरूले बलमिचाइ गरिरहने जस्तो पो देखियो हैन ?
हाम्रो देशमा राजनीतिक दलका नेताहरूले गरेको यस्तै यस्तै गलत कामले गर्दा दलहरू बेलाबेलामा पछारिने गर्दैआएका छन् । राजनीतिक दलहरूले रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन बुझ्नुपर्ने । रायमाझी आयोगमा के कुरा प्रष्टसंग लेखिएको छ भने– “मल्लिक आयोगको प्रतिवेदनमा दोषी देखाइएका व्यक्तिहरूलाई कारवाही नगरिएको कारणले आयोगले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिहरू आज हाम्रो आयोगमा पनि दोषी देखिएका छन् ।” त्यसकारण प्रतिगमनको टाउको उठाउन मौका खोजेर बसिरहने व्यक्तिहरूलाई जतिखेर पनि नियुक्ति गरिन्छ भने त्यसले फेरि पनि खतरा उत्पन्न गर्छ भन्ने सामान्य कुरा पनि राजनीतिक दलका नेताहरूले ध्यान दिन नसकेको देख्दा उनीहरूप्रति दवाव सिर्जना गर्नुबाहेक अरु केही पनि गर्न सकिन्न । राजनीतिक दलहरूका लागि सच्चिने मौका अझै पनि छ ।
० त्यही त, तपाईंहरूको आन्दोलन दलहरूप्रति लक्षित त हो नि हैन ?
हामीहरूको आन्दोलन दलहरूलाई सचेत गराउनका लागि हो । दलका नेताहरूले गरेका गलत काम र देखाइरहेका गलत प्रवृत्तिको विरोध गर्दै दलीय व्यवस्थालाई मजबुत बनाई संस्थागत गर्नका लागि हो ।
० तपाईंहरू प्रतिगमन भयो भन्नुहुन्छ । प्रतिगमनको सुरुवात पनि दलहरूले नै गरे नि हैन ?
दलहरूले गरे भन्दा पनि अहिलेका दलहरूका केही नेताहरूले गरे भन्नुपर्छ । हाम्रो आन्दोलन दल वा दलका नेताको बिरुद्धमा नभै ती नेताहरूको प्रवृत्तिको विरुद्धमा हो ।
हिजो गल्ती गरेका नेतालाई अब मत दिनु हुँदैन - सुशील प्याकुरेल, मानवअधिकारकर्मी
० मुलुकमा यति छिटै लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्ने आन्दोलन चलाउने अवस्था किन आयो होला ?
यो विडम्बना हो । देशको चेतनशील, बौद्धिक नागरिक र व्यावसायिक व्यक्तित्वहरू सडकमा ओर्लिरहेको स्थिति छ । अहिले एकातिर भनिन्छ देशको लोकतान्त्रिक विकास गर्ने, गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, नयाँ नेपाल बनाउने । त्यो नयाँ नेपाल बनाउने हात कुन हो, त्यसको जग के हो ? नयाँ नेपालरुपी भवन कसरी बन्नसक्छ ? जव कि देशका प्रबुद्ध भनिएकाहरू जसले नयाँ नेपाल निर्माणको जग बसाल्नुपर्ने हो तिनीहरू नै सडकमा ओर्लिनुपरेको छ । देशको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा खम्बा जस्तो भएर उभिनुपर्ने कानुन व्यवसायीहरूको संगठन नेपाल बार आज सडकमा छ । चिकित्सक, शिक्षक, प्राध्यापक सबै सडकमा छन् । को चाहिं सडकमा छैनन् ।
० यहाँहरूको आन्दोलनबाटै सबै कुरा ठीक हुन्छ त ?
हाम्रा नेताहरूलाई लागेको होला दुई–चारजना टाठा बाठाहरूले विरोध गर्दैमा केही हुँदैन । उनीहरूले त्यसो भनेका पनि छन् । तर उनीहरूले के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो आन्दोलन दलका बिरुद्ध हैन, दलमा पनि केही दलका केही नेताको क्रियाकलापका बिरुद्धमा हो । दलभित्र भएको नेतातन्त्रको बिरुद्धमा हो । धेरै हुकुमी शासनका बिरुद्धमा लडेका हामीहरू आज फेरि हुकुमी शासनमै फर्किसकेका छौं । त्यसका बिरुद्धको हाम्रो संघर्ष हो ।
० २०६२।०६३ को परिवर्तनसंगै मुलुकमा हुकुमी शासन झन बलियो भएर गएछ, दलीयताका नाममा मान्ने हो अब ?
यो एकदमै हो । यसको चूरो के हो भने– जब देशमा एउटा बहुदलीय व्यवस्थाको अभ्यास गरिंदै थियो त्यसमा धेरै कमी कमजोरीहरू थिए, नेता यिनै हुने, यी नेताको बिरुद्धमा संघर्ष अगाडि बढ्दै थियो । देशमा कानुनको शासन कसरी स्थापित गराउने, देशमा प्रजातन्त्रको जगलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने कुराहरू हुँदाहुँदै त्यही बीचमा माओवादीले जुन हिंसाको विजारोपण गरे त्यहीबाट संकट सुरु भएको हो । हिंसा भनेकै नेता प्रमुख हुन्छ । अहिले आएर सबै दलमा यो दम्भ यसरी फैलियो कि देशको संविधानमा असंवैधानिक किसिमले यत्रो संशोधन गरियो कुनै दलभित्र पनि यसको विरोध भएन । यहाँसम्म कि लोकतन्त्रवादी भनेर चिनिने दल कांग्रेस र एमालेले त आफ्नो केन्द्रीय समितिबाट निर्णय पनि गराउन सकेनन् । यो त नेतातन्त्रको मात्र हैन कि हुकुमी शासनको पुनःस्थापना गरिएको छ । यहाँ मोहन शमशेरको भूतले काम गरिरहेको छ । हामी त्यसको बिरुद्धमा लडिरहेका छौं ।
० त्यही त केही दलका केही नेताले हुकुम चलाइरहने, तपाईहरूजस्ता अधिकारकर्मी सडकमा उत्रने गर्नुभएको छ तर सुनुवाई भएको छैन । अब के गर्दा तपाईंहरूले बद्मास देख्नुभएका नेताहरू सुध्रिएलान ?
यसका लागि दुईवटा उपाय छ । एउटा हामीले अहिले जे गर्दैरहेका छौं त्यही नै गर्ने हो । हामीहरूले गर्दैगरेको आन्दोलनमा जति पनि नागरिक कर्मी, अधिकारकर्मी, पेशा, व्यवसायीहरू छौं, कुनै न कुनै दललाई मत दिनेमध्येमै छौं । हामी गैरराजनीीतक वा अराजनीतिक व्यक्ति हैनौं । हामी सबै राजनीतिलाई राजनीतिलाई राम्रोसंग बुझेका र मुलुकलाई लोकतन्त्रको बाटोमा हिंडाउनुपर्छ भन्ने हो । हाम्रो मत भनेको सचेत मत हो । हामीले जनताको बीचमा गएर भन्ने र जनतालाई सचेत बनाउने हो । सार्वभौम जनताको एउटै मात्र बाटो भनेको मतबाट अभिव्यक्त गर्ने हो । अब हामीले के भन्दैछौं भने– जसलाई तपाईंहरूले मत दिंदै हुनुहुन्छ त्यसलाई चिन्नुहोस् र उसले विगतमा के ग¥यो भनेर बुझ्नुस् ।
तसर्थ हाम्रो आव्हान त के छ भने आगामी चुनावमा अहिले जसले लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यता विपरीत गएर लोकतन्त्रलाई पहिरोमा पु¥याएका छन् तिनीहरू भनेको सीमित दलका सीमित नेता हुन् । यिनीहरूलाई राम्ररी चिनौं र आगामी निर्वाचनपछि उनीहरूको हातमा शासन नजाओस् भनेर जनतालाई सचेत बनाउनुपर्छ । अर्थात् हिजो गल्ती गरेका नेताहरूलाई अब मत दिनु हुँदैन ।